Cimilada sii kululaaneysa: Darajo ah in la qalayo oo aan lagu arkin 200 oo sano harooyinka sub-arctic | Saadaasha Shabakadda
Cimilada sii kululaaneysa: Darajo ah xaalufinta aan lagu arag 200 oo sano harooyinka sub-arctic
David melguizo | | Isbedelka Cimilada
Harooyinka Qeybta Kanada
Hoos u dhaca roobabka ee qaabka barafka lagu arkay sanadihii la soo dhaafay ee aagagga badda Kanada waxay u horseeday qalalan welwel leh inay ka baxdo harada Lake.
Tani waxay ahayd gunaanadkii ay gaareen qaar ka mid ah cilmi baarayaasha ka socda Jaamacadda Laval, Jaamacadda Wilfrid Laurier, Jaamacadda Brock iyo Jaamacadda Waterloo daraasad lagu daabacay dhowr toddobaad ka hor bogga rasmiga ah ee joornaalka sayniska cilmi baarista ee Geophysical. Muujinta hal daliil oo dheeri ah, hadii aysan wali ku filneyn iska cadashada kulaylka caalamiga ah.
Baarayaasha ayaa gabagabeyntan gaadhay ka dib markay darseen 70 haro oo u dhaw Old Crow, Yukon iyo Churchill, Manitoba, Canada. Intooda badan harooyinka wax laga barto waxay ka hooseeyeen hal mitir. Marka loo eego falanqaynta la sameeyay, in ka badan kala badh harooyinka oo ku yaal aagag yar oo fidsan oo ay ku wareegsan yihiin duur, ayaa muujinaya astaamo saxaro.
Dhibaatadani waxay badanaa ka timaaddaa hoos u dhaca biyaha ka yimaada dhalaalid. Tusaale ahaan, laga soo bilaabo 2010 ilaa 2012 celceliska roobka xilliga qaboobaha ee Churchil wuxuu hoos u dhacay 76 mm marka loo eego celcelis ahaan la diiwaan geliyey intii u dhaxeysay 1971 iyo 2000. Qallajinta harooyinka qaar, oo markii ugu horraysay ay muujiyeen indhaha qaawan sanadkii 2010, ayaa ka sii darneyd. ku dhawaaqay 2013.
Noocyada harooyinkaas, roobab qaab baraf ah waxay u taagan yihiin inta udhaxeysa 30% iyo 50% ee biyo gelinta sanadlaha ah. Nooca qalajinta ay arkeen cilmi baarayaashu wuxuu ahaa mid aan horay loo arag 200-kii sano ee la soo dhaafay. Intaas waxaa sii dheer, falanqaynta isotopic-ka ee lagu sameeyay phytoplankton weli waxay ku urursan tahay sariiraha harada waxay muujineysaa in harooyinka ay dayactireen dheelitirka aquifer muddo 200 sano ah.
Deganaashahan ayaa si lama filaan ah loo carqaladeeyay dhawr sano ka hor. Haddii isbeddelka xagaaga ee xagaaga iyo jiilaalka leh baraf yar uu sii socdo, sida loo saadaaliyay qaabka cimilada, qaar badan oo ka mid ah harooyinka hoostooda hoose ee gunta hoose ayaa gebi ahaanba qallali kara Way adag tahay in la sii odoroso dhammaan raadadka ka imanaya luminta deegaankan, laakiin waa run in cawaaqibyada bey'ada ay noqon doonaan kuwo muhiim ah.
Snowmelt waa ilo biyo muhiim u ah harooyin farabadan oo ka hooseeya arctic, laakiin moodooyinka cimilada ayaa saadaalinaya in roobabka oo qaab baraf ahi hoos u dhici doono gobolada qaar, cawaaqib xumo xagga deegaanka ah. Qodobkaan, sedex xuduuda ayaa loo isticmaalaa sida xogta isotopic-ka ee biyaha harada oo wadajira, wejiyada cowska dhulka dushiisa (laga bilaabo tundra furan ilaa keymaha xiran) iyo gargaarka dhulka si loo aqoonsado harooyinka u nugul xaalufinta xaaladaha daadad hooseeya oo qulqulaya oo ku yaal laba dhul-badeed-yar-yar-yar-yar - The Old Crow Plains, Yukon, iyo Hudson Bay Shoals, Manitoba, Canada.
Harooyinka ku yaal meelaha gacma-biyoodka hoose iyo bannaanka furan ee tundra waxay muujinayaan magdhow nidaamsan oo u dhexeeya cabbiraadaha tilmaanta cirrooclimatic ee isotopes oksijiinka biyaha harada ah (δ18O) in ka badan ololeyaal badan oo sambal ah, oo laga soo helay seellulose oo laga helay keydkii ugu dambeeyay Magdhowgan waxaa loo aaneeyaa uumi-baxa ba'an ee hodanka ku ah 18O kaasoo ka jawaabaya celcelis ahaan celceliska socodka biyaha barafka sannadihii la soo dhaafay.
Waxaa xusid mudan in harooyin farabadan ay kudhawaadeen inay qalalaan inta lagu gudajiray bartamihii xagaaga ee 2010, taas oo raacday jiilaal roobab hooseeya oo qaab baraf ah. Iyadoo lagu saleynayo diiwaanka taariikh nololeedka ah ee harooyinka noocaan ah, xaaladaha aadka u qalalan ee 2010 waxaa laga yaabaa inaysan dhicin 200 sano ee la soo dhaafay. Gunaanadyadan ayaa walaac ka muujinaya in hoos u dhaca qulqulka qulqulka barafka uu horseedi doono qallajin ballaaran oo laga sameeyo harooyinka gacmeed ee dhulka noocan ah.
Más información: WWF waxay ka walwalsan tahay xawaaraha iyo xoojinta isbedelka cimilada, Barafka Arctic ee ku baaba'aya heerka rikoorka, Baqdinta walaaca leh ee barafka Arctic
Fuentes: Warqadaha Cilmi-baarista Geophysical
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Cimilada sii kululaaneysa: Darajo ah xaalufinta aan lagu arag 200 oo sano harooyinka sub-arctic